Laba Dhulgariir Oo Xoog Leh Ayaa Gilgiley Bartamaha iyo Woqooyi Galbeed Shiinaha | Saadaasha Shabakadda
Casudi casals | | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Muuqaalka muuqaalka Jiuzhaigou, Gobolka Dhulgariirka
Shalay, dhulgariir cabirkiisu yahay 7,0 ayaa ku dhuftay bartamaha waddanka, gobolka Tibetan ee Jiuzhaigou. Saacadu markay tahay 21:19 waqtiga maxaliga ah, 13:19 GMT. Aag aad loo dalxiis tago oo ku yaal gobolka Sichuan. Sahanka cilmiga dhulka ee Mareykanka wuxuu muujinayaa in dhulgariirku runti uu ahaa 6,5. Si kastaba ha noqotee, caasimada gobolka ee Chengdu, oo 300km u jirta xudunta xudunta, saamaynteeda ayaa laga dareemay. Dowladda dalka waxay ka baqeysaa dhimashada ku dhowaad 100 qof, in kasta oo hadda ay dhinteen 19 qof. Ilaa 130.000 oo guri ayaa saameysey. Gobolka Jiuzhaigou, dalxiis ahaantiisa sida dabiiciga ah wuxuu martigaliyay 38.000 oo dalxiisayaal ah oo la daad gureynayo. Dadka ay dhibaatadu saameysey, waxaa jira dalxiis Faransiis ah iyo qof Canadian ah.
Saacado kadib, subaxnimadii maanta dhulgariir cusub ayaa ku dhuftay gobolka waqooyi-galbeed ee Shiinaha, XinJiang. "Kaliya" 2.000km dhulgariirkii kale. Tani waxay ahayd qiyaasta 6,6 ee qiyaasta qiyaasta. Waxay dhacday 7:27 saacadda maxalliga ah, 23:27 GMT, waxaana la socday 121 ruxitaanno ka dib marka loo eego xarumaha la socodka cilmiga dhul gariirka Shiinaha. 3 bilood kahor isla isla deegaankan waxaa horey u saameeyey dhul gariir 5,5 oo ay ku dhinteen 8 qof. Waqtigaan la joogo, dhulgariirkan cusub wuxuu durba dhaawacay 30 qof. Jirka Shiinaha ayaa dhaqaajiyay heerka degdegga 1, iyadoo 1 uu yahay kan ugu daran.
1 Dhulgariir ka dhacay bartamaha magaalada Jiuzhaigou, Sichuan
2 Dhulgariirkii Woqooyi-bari XinJiang ee gobolka Jinghe
3 Qeybta galbeed ee Shiinaha oo u nugul dhulgariir
Dhulgariir ka dhacay bartamaha magaalada Jiuzhaigou, Sichuan
Xogta ugu dambeysa ayaa sheegeysa in ilaa 250 qof oo dhaawac ah loo gudbiyey isbitaalada, 40 ka mid ah xaaladoodu halis tahay. Dhulgariirku, oo lahaa qoto dheer 20 kiiloomitir, sida laga soo xigtay xarunta shabakadaha Shiinaha ee Seismological Networks, ayaa dib u soo nooleysay cabsidii badan ee dadka. Waxay ahayd isla gobolkaas, Sichuan, in sanadkii 2008 ay soo martay mid ka mid ah dhulgariirradii ugu xumaa ee cabirkiisu ahaa 8,0. Isku dheelitirnaanta tani waxay ahayd in ka badan 90.000 oo qof oo u dhexeeya dhaawac iyo kuwa dhintay. Dadku waxay ka carareen guryahooda habeenkii, iyagoo argagaxsan.
Madaxweynaha Xi Jinping wuxuu ku baaqay dadaal si loo bilaabo qaadista samatabbixinta dhaawacyada, isaga iyo ra'iisul wasaaraha, wuxuu ku booriyay hay'adaha maxalliga ah inay si dhakhso leh wax uga qabtaan si ay u fuliyaan dhammaan howlaha gargaarka ee lagama maarmaanka ah Dhamaan dalxiisayaasha, 30.000 oo kamid ah ayaa laga daad gureeyay aaga, halka 10.000 oo kale ay wali sugayaan inay baxaan. Aagga buuraleyda ah waxaa caan ku ah biyo-dhacyo qurxoon iyo qaabab karst ah.
Fiidiyowga soo socda waxaad ku arki kartaa duubista hawada diyaarad helikobtar ah oo ku saabsan saameynta dhulgariir ee buuraha, sida dhul go'idda.
Dhulgariirkii Woqooyi-bari XinJiang ee gobolka Jinghe
Gobolkan oo ku dhow Bartamaha Aasiya, dhulgariirkii labaad wuxuu sababay ugu yaraan 33 dhaawacyo, laba ka mid ah xaaladoodu waa halis. In ka badan kun guri ayaa la saameeyey, kuwaas oo 142 ka mid ah ay burbureen. Maamulka XinJiang ayaa baajiyay 60 jidadka tareenka. Dabdamiska iyo kooxaha caafimaadka ayaa tagay aagga ay dhibaatadu ka dhacday halkaas oo gargaar bini’aadamnimo loo diray. Teendhooyin, busteyaal, jaakado, iwm.
Gobolka dhulgariirkii labaad
Dad badan ayaa isweydiiyay inuu jiro xiriir ka dhexeeya labada dhulgariir ee xoogan ee ku dhacay waqti yar. Khubarada cilmiga dhul gariirka ee ay la tashatay boostada subaxnimada ee South China ayaa sheegay in aysan u muuqan in ay arkeen xiriir toos ah oo u dhexeeya labada dhulgariir ee mudnaanta leh. Masaafo aad u badan ayaa u dhaxeysa labadooda, waxayna xasuustaan ​​in galbeedka Shiinaha uu had iyo jeer ahaa dhulgariirro isdaba joog ah.
Qeybta galbeed ee Shiinaha oo u nugul dhulgariir
Aagga ballaadhan ee ay dhammaan dhulgariirradu ka dheceen, waxaa ku dhaca gariirro isdaba joog ah sababo la xiriira dhaqdhaqaaqa dhulgariirka weyn. Waxay u sabab tahay khilaafka taarikada teknikada weyn ee Aasiya iyo Hindiya. Waxay badanaa ka dhacaan meelaha ay ku yar yihiin dadka, sida plateau-ka Tibetan ama lama degaanka. Ugu dambayntii markay ku dhacaan aagag aad u tiro badan, waxyeeladu aad bay u badan tahay.
Xusuus gaar ah samee si aad u xasuusato in dhulgariirku yahay wax aanan saadaalin karin goorta uu dhici doono. Laakiin haddii ay dhacdo inaad ku noolaato, is dejinta waa mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah. Iskusoo wada duuboo, si qabow u fikir, oo u bax meelaha furan intaanay xoogeysan, kana fog derbiyada, geedaha, iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Laba dhulgariir oo xoog leh ayaa ka dhacay bartamaha iyo waqooyi-galbeed Shiinaha